Xildhibaan ugu baaqay Xildhibaannada iney Mooshin ka keenaan Guddoonka Golaha Shacabka – Kalfadhi
December 16, 2018 December 16, 2018 Kalfadhi
Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar, oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka, ayaa ugu baaqay 135-ta Xildhibaan ee diidan Mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha Soomaaliya in ay ku raacaan wuxuu ugu yeeray “Hindisaha Xil Ka Qaadista Guddoonka Golaha Shacabka” ee is khilaafsan Xiligaan.
Waxa uu xusay iney Hogaanka Golaha inta badan is khilaafaan, saasdaraadeedna ay tahay iney Xildhibaannadu arrintaas go’aan ka gaaraan. “Waxaan qabaa in haddii ay hishiin waayaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Labadiisa Kuxigeen aan wada tuurno” ayuu yiri Xildhibaan Dhaqtar.
Waxa uu sheegay in, haddii ay Xildhibaannadu la qaadanayaan, uu soojeedinayo in iyana xilka laga tuuro, oo la eryo Xoghayaha iyo Habdhawraha Golaha. “Waliba aan ku darno Xogahayaha iyo Habdhowraha Golaha Shacabka” ayuu yiri Xildhibaan Idiris Cabdi Dhartar.
Xildhibaanku waxa uu qabaa in, haddii aysan Xildhibaannadu sidaas yeelan, uu sii taagnaan doono khilaafka Golaha Shacabka. “Haddii aan rabno in uu shaqeeyo Golaha Shacabka waa in aan talaabo ka qaadnaa cid kasta oo shaqada Golaha hortaagan” ayuu yiri Dhaqtar.
Intaas waxa uu ku daray baaq uu u diray Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Abdiraxmaan. Waxa uu u soojeediyey inuu dhaqso dib ugu soo laabto Xarunta Filla Hargeysa, “si” buu yiri “loo socod siiyo shaqada Golaha Shacabka”. Isaga oo arrinkaas adkeynaya ayuu yiri “Guddoomiyaha Golaha Shacabka waa in uu kusoo laabtay Xarunta Filla Hargeysa si ay shaqada Golaha Shacabka u socoto”.
Xildhibaan Idiris waxa uu isku sheegay inuu ka mid yahay Xildhibaannada Golaha Shacabka ee jeclaa in labada sano ee harsan lawada shaqeeyo Mooshin la’aan, “laakiin waxaan taasi garab uga waaynay” buu yiri “Guddoonka Golaha Shacabka iyo Xildhibaanadda Qaar”.